आज देखि खुल्यो इमर्जिङ नेपालको आईपीओ
इमर्जिङ नेपालको आईपीओ आज देखि निष्कासन तथा बिक्रि खुल्ला भएको छ ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरमा ५ लाख ५५ हजार ६०० कित्ता आइपीओ निष्कासन गरेको हो । यो मध्ये २% अर्थात् ११ हजार ११२ कित्ता सेयर कर्मचारी र ५% अर्थात् २७ हजार ७८० कित्ता म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याएको छ । बाँकी ५ लाख १६ हजार ७०८ कित्ताका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सो आईपीओमा छिटोमा फागुन १ गते र ढिलोमा फागुन ११ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको शेयरमा माग भन्दा बढी आवेदन पर्ने भएको हुदा १० कित्तानै आवेदन दिनु ठिक देखिन्छ।
आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले सि–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरोशेयर वेबसाइट तथा एप मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ्गमा इक्रा रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी आईआर डबल बि प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
पूँजीको संरचना :
१) अधिकृत पूँजी : कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. ५,००,००,००,०००/ (अक्षरेपी पाँच अर्व मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १०० अंकित दरका ५,००,००,००० (पाँच करोड) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।
२) जारी पूँजी : कम्पनीको जारी पूँजी रु. ५५,५६,००,०००/ (रु. पचपन्न करोड छपन्न लाख) हुने छ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १०० दरले५५,५६,००० (पचपन्न लाख छपन्न हजार) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।
३) चुक्ता पूँजी : हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. ५०,००,४०,००० (रु. पचास करोड चालिस हजार मात्र) रहेको छ र जसलाई प्रति शेयर रु.१०० का दरले जम्मा ५०,००,४०० थानमा (पचास लाख चार सय) कित्ता शेयरमा विभाजन गरिएको छ । यस निष्काशन मार्फत रु.५,५५,६०,०००/(रु.पाँच करोड पचपन्न लाख साठी हजार) सर्बसाधारणहरुलाई बाँडफाँड पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. ५५,५६,००,००० (रु. पचपन्न करोड छपन्न लाख) हुने छ ।
इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड सार्वजनिक निजी साझेदार कम्पनीको रुपमा प्रचलित कानून बमोजिम २०७२ साल श्रावण ३२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भै मिति २०७२/१२/२६ गते देखि कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत काम/कारोबार गर्दै आइरहेको छ ।
कम्पनी स्थापना गर्नुको मुख्य उद्धेश्य आधारभूत संरचनाको ढाँचा, उद्योगलाई प्रोत्साहान र व्यवस्थापन उन्मुख व्यापारलाई प्रोत्साहान गरी नेपाललाई उन्नति तर्फ अघि बढाउनु हो । इमर्जिङ्ग्ग नेपाल लिमिटेडले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वमा, प्रसिद्ध व्यवसायी संघ, बैंक तथा विक्तीय व्यवसायी, कर्मचारी र व्यवसायिक व्यत्तिलाई एक साथ ल्याई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विभिन्न विषयहरुमा समाधानका उपायहरु प्रस्ताव गर्नेछ।